ट्राफिक कारबाहीमा पर्नु भयो ? यसरी ट्रयाक गर्नुहोस् आफ्नो कागजात – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on ट्राफिक कारबाहीमा पर्नु भयो ? यसरी ट्रयाक गर्नुहोस् आफ्नो कागजात
यदि तपाईं यी तीन ओटा जिल्लामा केही गरी ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्नु भयो भने डीटीएस सिस्टमको सहयोग लिन सक्नु हुनेछ ।
यो सिस्टम अनुसार ट्राफिक प्रहरीले खिचेर लगेका आफ्ना कागजात कुन कार्यालयमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउन मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर ‘Echalan’ टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आर्थिक वर्ष र चिट नम्बर उल्लेख गरी ३४००१ मा पठाउनुहोस् ।
← विराटनगरमा मध्यरातमा महिलाको घरमा झ्यालबाट छिरेका यी युवाले के गरे यस्तो ? → स्क्रव टाइफसबाट गोरखामा पहिलो पटक मान्छेको मृत्यु